Lossless Audio Playback Zviri pamutemo Kuuya kuIOS 11 | IPhone nhau
Isu tinoramba tichiongorora iOS 11 yako, uye ndezvekuti mu iPhone News isu hatisi kuzokutendera iwe kurasikirwa zvachose chero chinhu maererano neakanyanya mamiriro ezvinhu eApple nharaunda. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, Cupertino siginecha zvigadzirwa zvinowanzodiwa nevagadziri uye nehunyanzvi nyanzvi, chinhu icho Apple yakagara ichikwanisa kupa mubairo nekutarisa kunze kune zvido zverudzi urwu rwemushandisi.
Nhau dzichangoburwa dzangosvika mu beta nyowani yeIOS 11 nenzira yakanakisa, uye ndizvo Nekubhurawuza maFaera, iyo nyowani maneja maneja, isu takakwanisa kuona kuti izvozvi zvave kugona kuburitsa isina kurasikirwa odhiyo.
Haisi chimwe chinhu chakatsiga icho mushandisi chaicho Reddit, chokwadi ndechekuti iTunes yaive yatowirirana neodhiyo muFLAC fomati kwenguva yakareba, zvirinani kuti iOS 10 yatobvumidza, zvisinei, isu taizofanira kushandisa mafomu akagadzirwa nevechitatu mapato (kwete eayo mashandiro) kana tichida kuwana chimwe chinhu kubva murudzi urwu rwezvinhu zvemumhanzi zvatiri kureva. Nekudaro, zvinhu zviri kuzochinja nekukurumidza nekutenda kune iyo maneja faira iyo iOS 11 inounza nekutadza.
Zvisinei, in iDownloadBlog Ivo vakaedza kuAirDrop rwiyo muFOMAC fomati uye chiziviso chakayambira kuti ivo vanofanirwa kutendeukira kune wechitatu-bato kunyorera. Zvirinani mhando iyi yekutamba haina kubvumidzwa kana kusunganidzwa kupfuura iyo nyowani yeFiles application, saka isu tichafanirwa kupfuura neBhokisi, Dropbox kana iCloud Drive kana tichida kubatanidza mimhanzi muFLAC fomati kune yedu iPhone. Kunyange zvakadaro, Isu tinokuyeuchidza iwe kuti isu tichiri mune yekutanga yeiyo iOS 11 betas, zvinoreva kuti inogona kuita shanduko mumavhiki anotevera, zvese zviri zviviri zvinobatanidza iyo fomati yeFLAC mune yese inoshanda system, uye kuibvisa kunyangwe muFiles.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Yakarasika yekuteerera yekutamba iri kuuya zviri pamutemo kuIOS 11
Tichaona iyo iPhone 8 inokwanisa kutamba hi-fi odhiyo, 3D odhiyo uye yakatenderedza ??? pamwe neiyo LG V20, HTU 11 uye iyo NOKIA 9 ??? Zvakare ndinofunga inofanirwa kutsigira mamwe mafomati asina kurasikirwa senge "DSD, AIFF, APE uye ALAC" kuwedzera kune dvc odhiyo, AIFF, aptX, HE-AAC, LC-AAC, SBC, PCM, LDAC
Iwe unogona ikozvino kuona iyo yakazara vhidhiyo yeiyo WWDC kiyi yakakosha paYouTube